प्रथम समृद्धि गोरिल्लाज बास्केटबल प्रतियोगीता सम्पन्न - दुनियाँको खबर
Home खेलकुद प्रथम समृद्धि गोरिल्लाज बास्केटबल प्रतियोगीता सम्पन्न
on: २५ पुष २०७७, शनिबार ०८:०७
काठमाडौ । प्रथम समृद्धि गोरिल्लाज ३ह३ बास्केटबल प्रतियोगीता सम्पन्न भएको छ । समृद्धि स्कुलद्वारा आयोजित बास्केटबल प्रतियोगीता स्कुलको बास्केटबल मैदान बालाजुमा सम्पन्न भएको हो । दुईदिन चलेको उक्त प्रतियोगीतामा ब्वाइज तर्पm २४ र गल्र्स तर्पm १२ गरि जम्मा ३६ वटा टिमहरूले भाग लिएका थिए ।
उक्त प्रतियोगीताको ब्वाइजमा बि.एम.के. “सी” टिम प्रथम भयो भने उप–बिजेतामा पनि बि.एम.के. कै “बी” टिम रहेको थियो । यस्तै गरी गल्र्समा आयोजक समृद्धि स्कुलको टिम प्रथम भएको थियो भने टिम सबिनाले दोश्रो स्थान हात पार्न सफल भएको थियो । प्रतियोगीताको मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयरको उपाधि ब्वाइज तर्पm बि.एम.के. “सी” टिमका सोनम प्रयाग शेर्पा तथा गल्र्स तर्फ समृद्धि स्कुलका प्रेडिका महर्जनले जित्न सफल भएका थिए । फाइनल खेलको पश्चात विजयी टोलिका खेलाडीहरूलाई समृद्धि स्कुलका सि.ई.ओ तथा प्रिन्सीपल नरेश प्रसाद श्रेष्ठ, नेपालको राष्ट्रिय महिला बास्केटबल टिम क्याप्टेन सदिना श्रेष्ठ लगायत अन्य निर्देशकहरूले पनि मेडल, ट्र««फी र प्रमाणपत्र बितरण गरेका थिए । प्रतियोगीताको सम्पूर्ण संयोजन तथा व्यवस्थापन समृद्धि गोरिल्लाज (सिनियर टिम)ले गरेको थियो ।
समृद्धि स्कुल, त्यहाँका प्रिन्सीपल तथा निर्देशकहरू, समृद्धि गोरिल्लाज महिला बास्केटबल टिमका खेलाडीहरू तथा यस प्रतियोगीताबाट उठेको रकम समेत गरी रु. दुई लाख नगद उक्त अवसरमा क्याप्टेन सदिना श्रेष्ठलाई सहयोग स्वरूप प्रदान गरिएको जानकारी समृद्धि स्कूलले दिएको छ ।